Mpamono olona sa iharan-doza? Mpizahatany amerikanina misedra olana ao Anguilla
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Mpamono olona sa iharan-doza? Mpizahatany amerikanina misedra olana ao Anguilla
Ny fizahan-tany Anguilla dia amin'ny endriny krizy momba ny mpamono olona amerikanina sa fiarovan-tena?
Nino i Allison Muhammad avy any Anguilla: Kenny Mitchell, 27 taona, dia novonoin'ny vahinin'ny hotely iray tany Anguilla nataon'ny mpizahatany amerikana iray avy any Connecticut izay nilaza fa mpangalatra izy. Kenny dia injenieram-panorenana Nahazo alàlana handeha ny manan-karena, fotsy, mpamono olona Anguilla, Hapgood ary amerikanina izy ary fotsy. ”
Ho valiny dia nangataka fitoniana ny tompon'andraikitra sy ny tompon'andraikitra fizahan-tany ao amin'ny Nosy Karaiba Britanika, ary nisy ekipa fifandraisana amerikana momba ny krizy any amin'ny nosy hitazona ity vaovao ity ho voafehy.
Ilay mpamono Amerikanina voampanga Gavin Scott Hapgood, 44 taona, dia nilaza fa nanafika ilay lehilahy mpikarakara "fiarovana", dia nolavin'ny havan'ilay niharam-boina izany fiampangana izany.
Voampanga tamin'ny famonoana olona i Hapgood ary navotsotra tamin'ny $ 74,000 taorian'ny namonoana an'i Mitchel tamin'ny 13 aprily.
Nandao an'i Anguilla nankany Etazonia izy tamin'ny fiaramanidina manokana. Hapgood dia mpikambana miavaka amin'ny vondrom-piarahamoniny ary toy izany koa no niharany tany Anguilla.
Nilaza ny mpisolovava an'i Hapgood fa hiverina any Anguilla ny mpanjifany amin'ny volana aogositra ho an'ny fitsarana azy.
Ireo mpizahatany amerikana ao Anguilla dia nahatsikaritra fiovana tampoka teo amin'ny toe-tsain'ny mponina manohitra azy ireo ary nampitandrina ny tompon'andraikitra fizahan-tany fa mety hanakorontana ny indostrian'ny fizahan-tany Anguilla izany.
Maniry ny Polisin'ny Royal Anguilla ny tsy tokony hiadian-kevitra momba ny raharaha ny eo an-toerana ary miangavy izy ireo mba tsy hiresaka izany amin'ny mpanao gazety.
United Airlines dia nanambara ny serivisy voalohany tsy miato an'i New York / Newark-Cape Town